Kuchinja kweMicrososft kuvhura sosi. Tsananguro | Linux Vakapindwa muropa
Kuchinja kweMIcrosoft kuvhura sosi. Tsananguro yeaimbove mukuru
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Linux vs. Windows
Nguva dzese kana mumwe wevanyori veLinux Vakapindwa muropa (ini ndinofunga kuti ndini ndinozviita zvakanyanya) nyora yakanaka chinyorwa nezveMicrosoft, vaverengi vazhinji vanoita sekunge tiri kushaga muto wegariki pakudya kwemanheru kwevampires. Izvi zvinotangira kubva ku zvine hungwaru mafungiro yekambani yakananga open source izvo zvakaramba zvakanyatsopinda mukati memakore gumi ekutanga ezana ramakumi maviri nemasere.
Vazhinji vedu vakajeka chii chaive chikonzero chekuchinja kwekambani, asi, zvirinani kwandiri, akange asina kunzwisisa chikonzero cheruvengo. Mushure mezvose, Linux haina kumbopfuura chikamu che2% yemusika wedesktop.
Iye zvino Steven Sinofsky, aimbova mukuru weWindows neHofisi akapa tsananguro nezve chikonzero kuseri kwezvirevo zvakadai kubva kune aimbova CEO Steve Ballmer:
Linux ikenza inonamira mune yehungwaru chivakwa pfungwa kune zvese zvayabata.
Sinofsky akapindura paakaundi yake yeTwitter kuti chisimbiso kubva kuna Microsoft wezvemutemo mukuru chipangamazano uyo muhurukuro paMIT akati:
Microsoft yaive parutivi rwenhema renhoroondo apo sosi yakavhurika yakaputika pakutanga kwezana, uye ini ndinogona kuzvitaura pachangu pachangu.
Sinofsky anofunga kuti hazvina kudaro, kwete kuti Microsoft yakanga isiri iyo, kana zvisiri izvo yaive ine bhizinesi modhi yakavakirwa pasoftware seyenzvimbo yezvivakwa, uye izvo iyo modhi yaive nemusoro apo kambani yakavambwa.
Kusvikira munguva pfupi yapfuura, kugovera software kunodhura mari. Zvakatora nguva yakareba kubva pakukurumbira kweInternet kudzamara munhu wese (kana zvirinani vazhinji) awana mukana wehukama hwakanaka kumba kana kubasa. Mukuru wevaverengi vedu anozorangarira pawakakwanisa kubvunza Canonical kuti ikutumire yemahara Ubuntu cd. Imwe nzira yaive yekutenga magazini yaipa CD kana kuitenga muchitoro chepamhepo.
Muchikamu chekambani, software yaive chikamu chekomboni ine inodhura Hardware yawaifanira kutenga kana kubvarura kana chikamu chebasa rekubvunza rawaifanira kuhaya.
1 Kwakatangira iyo Microsoft bhizinesi modhi
2 Shanduko yeMicrosoft
Kwakatangira iyo Microsoft bhizinesi modhi
Aimbova mukuru weWindows anoyeuka izvozvo mukutanga kwema70s zvemagetsi vanofarira vakatenga makiti izvo zvakavatendera kuisa pamwechete avo mapurojekiti (chimwe chinhu senge Raspberry Pi kana Arduino vanasekuru navanasekuru) izvo zvinogona kugadziridzwa Iyo software yekuronga yaive yakagovaniswa zvakasununguka.
Bill Gates neshamwari yake Paul Allen Vakagadzira vhezheni yeiyo Basic programming mutauro weAltair makomputa. Zvisikwa zvaro zvakakurumidza kubudirira. Saka nekukurumidza kuti yako (yakadhindwa) kodhi kodhi yakagovaniswa isingamire.
Izvi zvakakurudzira kunyunyuta kwaBill Gates uyo yakaburitsa tsamba ichinyunyuta kuti vakaisa mari inosvika zviuru makumi mana zvemadhora nenguva nemari uye vakangokwanisa kuwana chidimbu chete nekuda kwekuparadzirwa zvisiri pamutemo.
Tiri kutaura nezvechigadzirwa chekutanga cheMicrosoft sekambani.
Hazvishamisi izvo kwemakumi matatu emakore kambani yakaona sengozi zvinhu zvese zvaityisidzira bhizinesi modhi yayo zvichibva pavanhu vanobhadhara kopi yega yega software. Gare gare, mamwe makambani akazvimiririra akanangana nekugadzirwa kwesoftware senge Corel kana Adobe vakatora chirongwa chakafanana uye negodo vakadzivirira pfuma yavo yehungwaru.
Zvechokwadi, yakavhurwa sosi haina kupokana nehungwaru chivakwa modhi, zvinongowedzera huwandu hwezvinhu izvo mushandisi anotenderwa kuita.
Chaizvoizvo hapana Linux kana yakavhurwa sosi dzimwe nzira fuPaita dambudziko kuMicrosoft pa desktop. Dambudziko rakaonekwa pamaseva.
Sinofsky anodaro Linux yaive (uye ichiri) zvirinani kupfuura WindowsNT pamaseva. Kwechinguva, Microsoft yakakwanisa kutarisira mukana uyo vatengi vekambani vakasarudza kutsigirwa nekambani kuvaka yavo mhinduro yekuita zvirinani uye nemitengo yakaderera.
Zvese zvakashanduka apo IBM nemamwe makambani anokwikwidza kubva kuMicrosoft (pamwe nekuonekwa kwemalayisensi akavhurika asinganetsi kupfuura iyo GPL) akawana zvakanakira kupa masevhisi zvichibva pane yakavhurika sosi, pamwe nesarudzo nyowani dzekushambadzira. Microsoft chete kumucheto muchikamu chinobatsira kwazvo che pie chakapera.
Kupedzisa kuomesa zvinhu, zvinoonekwa Google neAmazon izvo panzvimbo yekugovera software zvinotengesa sevhisi yekumhanyisa software. Nei ungatenge rezinesi reHofisi kana iwe uchikwanisa kushandisa izwi processor kana kutumira maemail kubva kubhurawuza rako? Uye, muzviitiko zvakawanda mahara.
Kana kuti hausi kuzotenga rezinesi rekushandisa rekomputa imwe neimwe yekambani yako kana uchikwanisa kumhanyisa sisitimu imwechete mumushini chaiwo kubva kune chero komputa uchibhadhara chete nguva yaunoshandisa.
Iine bhizinesi modhi inoenderana nekutengeswa kwemalayisensi pasina ramangwana, Microsoft yakasiiwa isina imwe sarudzo kunze kwekugamuchira chokwadi uye kutsigira yakavhurwa sosi iyo yakanyatsogadzirirwa kupa vatengi izvo zvavanoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuchinja kweMIcrosoft kuvhura sosi. Tsananguro yeaimbove mukuru
"Yakavhurwa sosi haina mubvunzo nemhando yezvivakwa" hongu zvazvinoita, zvirinani mune yayo yepakutanga fomu yemahara software yakagadzirwa semuJuda yakananga kumhando yekopiraiti, inoshandisa simba rayo kuzvirwisa.
Pindura kuna john
MicroSoft kushambadzira ndiyo yakanakisa. Nyanzvi mukumiririra chokwadi.
Pindura kuna L
Izvo Microsoft inoda linux ini ndinoona seyakajairwa (vanovapa mahara), tora mukana weiyi sisitimu kuti uishandise ivo kuvanakira negore ravo, mushure mezvose, Unix neBDD zvigadzirwa, linux ... zvakagadzirirwa maseva, kwete kuishandisa mumacomputer ako wega apo iyo pfungwa yaisatombovapo muma70s.Chokwadi ndechekuti linux kernel yakaiisa muzai kumakambani, chero munhu anogona kuitora uye kuishandisa, kusanganisira google ine android, redhat on sevha, uye ikozvino microsoft ichiwana mashandiro emahara.
Jose Manuel akadaro
une chikonzero chose muchadenga
Pindura kuna jose manuel
Izvo hazvisi chete nezve Micro $ kazhinji maonero kune yakavhurika sosi, asi zvakare (pakati pezvimwe zvinhu) nezve maitiro ayo maererano nekuvanzika kwevashandisi vayo, uye kutonga kwavanoita pamusoro peM $ zvigadzirwa zvavanotenga, kana pane hardware yavanotenga, kazhinji ne M $ tax software, uye nekudaro, pasina kutonga pamusoro peHW yavo futi.
Hunhu hwaM $ munguva yakapfuura hahuvimbika (handitende) kuti anochinja nehusiku uye ikozvino ihanzvadzi yerudo. Kana akapindira muLinux, hakusi kushaya hanya, imhaka yekuti bhizinesi rake riri kuramba richiwedzera uye, uye kana zvasvika ndezvekuti chimwe chinhu chiri kuzobuda, uyezve, Linux haisi kuzobatsirwa. Iko kurega gava kuti ripinde mukati mehuku uye tinofanirwa kunge tichimutarisa kuitira kuti asarivhiringidze. Zvingave zvirinani kusamubvumidza kuti aenderere mberi nebhizinesi rake.
Ini handina ruzivo rwechizvino-zvino, asi kugoverwa kweLinux kuchiri kubhadhara Microsoft kuti ikwanise kushandisa UEFI Secure Boot?
Ini handisi kupindura chero chirevo chine mazwi Micro $ kazhinji, Hasefroch, Winbugs, nezvimwe zvakadaro.
Ivo vari kutuka kune yemahara software nharaunda kupfuura kuMicrosoft.
Tarisa uone ichi chinyorwa:
Pindura kune l1ch
Iyo "ine rudo" yakavhurika sosi yaive Hyperbole iyo vazhinji vanoomerera pakutorwa chaiko.
Ini ndinogona kukusanganisa iwe kune zvakawanda zvinyorwa zvangu apo ini ndoti rudo rwuri sei kana risiri bhizinesi.
Chiri kunyomba ndechekuti umambo hunotungamirwa nemaitiro ematsotsi ayo Microsoft yashandisa kwemakore makumi maviri nemashanu apfuura.
Kuti nharaunda inoshandisa aya mazwi kukambani iyo, ngatirangarirei, yaita kukuvadza kusingaperi kune software, kuvandudzwa kweInternet uye rusununguko rwevashandisi ndidzo idiki dzavanokodzera.
Mune ino kesi, zvaive zvakafanira kuwedzera pakupedzisira kuti ikozvino bhizinesi raMicrosoft rinoenderana zvakanyanya neAzure, kutevedzera Amazon, uko vatengi vebhizimusi vari kuda kubhadhara, saka inogona kubhadhara software yemahara.
Pindura kuna Roberto
Kugovera uye Kudiwa dambudziko nderekuti Sangano rinomanikidza zviremera nehurumende kushandisa zvigadzirwa zvavo vachibhadharisa COIMAS kana LOBYS mumaPrivate neHurumende Makambani ... saka dambudziko reZVINODA ... Makambani ari kutarisira Torpedoing chero chiratidzo che YEMAHARA SOFTWARE
Pindura kuna EderAudifonos
RangeAmp - Yakateedzana yekurwiswa kweCDN inoshandisa iyo Range HTTP musoro
Ungave sei wekuzvarwa muKubernetes? naMarkus Eisele